Cristiano Ronaldo oo xalay sameeyey Rikoodh iyo taariikh kale oo uusan weli gaarin Lionel Messi – Gool FM
(Turin) 11 Jan 2021. Cristiano Ronaldo ayaa xalay shabaqa soo taabtay, waxaana uu sidaas ku gaaray rikoor kale oo weli uusan sameynin Lionel Messi.
Weerarka Kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa noqday xalay ciyaaryahankii ugu horreeyey ee 15 gool dhaliya mid kasta oo ka mid ah 15-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub.
Cristiano Ronaldo ayaa sare u soo qaaday guulihiisa iyo goolashiisa kuwaasoo uu ku quruxsanayo CV-giisa, waxaana markale uu shabaqa soo taabtay kulankii ay xalay Bianconeri 3-1 uga adkaatay Sassuolo ee horyaalka Serie A.
Ronaldo waa kii ugu horreeyay ee horyaallada waa weyn ee Yurub, kaasoo gaara 15 gool 15 xilli ciyaareed oo xiriir ah.Waxa ay ka dhigan tahay in weeraryahanka reer Portugal uu noqday ciyaaryahanka kaliya ee ugu yaraan 15 gool dhaliya mid kasta oo ka mid ah 15-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.
CR7 ayaa markii ugu horreysay oo uu tirada labo godka ah dhaliyo xilli ciyaareed horyaalka ah, waxa ay ahayd fasal ciyaareedkii 2006-07, markaasoo uu ahaa xiddig u ciyaara kooxda Manchester United, isla markaana uu dhaliyey 17 gool 34 kulan oo uu saftay.
Waxaa xusid mudan in Ronaldo oo 36-sano jirsan doona bisha soo socota, uusan hoos uga dhicin tiradaas xilli ciyaareed buuxa tan iyo markaas.
Ronaldo xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa horyaalka waa kal ciyaareedkii 2014-15 markaasoo uu ku sugnaa kooxda Real Madrid, isla markaana u dhaliyey 48 gool 35 kulan oo uu u saftay horyaalka La Liga.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa haatan 15 gool dhalinaya 12 xilli ciyaareed oo xiriir ah, rikoorka uu xalay gaaray Ronaldo waa mid u dhiman kabtanka kooxda Barcelona.
Ninka ay CR7 xafiiltamaan ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay inuu gaaro 15 gool 12 xilli ciyaareed oo isku xiga oo uu ku qaatay Barcelona tan iyo xilli ciyaareedkii 2008-09, iyadoo 11 gool uu dhaliyey ilaa iyo haatan horyaalka La Liga, halka sanadkan uu saxiixay 13 gool.
Yeelkeede, sheekada cajiibka ah waa ay tahay in Sassuolo ay ahayd kooxdii uu ka dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey horyaalka Serie A markii uu ku soo biiray Juventus, waxaana kulankaasi oo dhacay bishii September ee sanadkii 2018 uu ku dhammaaday 2-1 ay ku adkaatay Juventus.
Si kastaba ha noqotee, Cristiano Ronaldo ayaa haatan dhaliyey shan gool shan kulan oo uu ciyaaray tartanka horyaalka Serie A kaddib goolkiisii uu dhalay xalay oo Axad ahayd.
Xiddigaha Man United ee Pogba, Lindelof & Shaw oo shaki laga gelinayo kulanka Burnley... (Miyey diyaar u noqon doonaan inay wajahaan Liverpool?)
Waa tee kooxda ka dhisan dalka Talyaaniga oo bartilmaameedsanaysa daafaca Arsenal ee Kieran Tierney??